ဗဟုသုတ Archives - Page2of 63 - Latest Myanmar News
မြေကွက်ပုံစံပေါ် မူတည်ပြီး ဧကတွက်တွက်နည်း မြေဧကကို ဘယ်လိုတွက်ရသလဲ ခဏခဏ မေးလာလို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှင်းလင်းအောင် တွက်ချက်နည်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မိမိမြေကွက်၏ ပုံသဏ္ဍန်ကိုကြည့်၍ ဧကတွက်နိုင်ပါသည်။ လေးနားညီ စတုရန်းပုံစံ ဖြစ်ပါက ၂၀၈.၇၁’ × ၂၀၈.၇၁’ ÷ ၄၃၅၅၉.၈၆ = ၁ ဧက ဥပမာ: ၁၀၀ ပေပတ်လည် အကွက်ဖြစ်လျှင် ၁၀၀’ × ၁၀၀’ ÷ ၄၃၅၆၀ = ၀. ၂၂၉ ဧက နှစ်နားညီ စတုဂံပုံစံ ဖြစ်ပါက (လ x န)’ ÷ ၄၃၅၆၀ = … ဧက ဥပမာ: (၄၀’×၆၀’) ÷ ၄၃၅၆၀ = ၀.၀၅၅ ဧက … Read more
July 13, 2021 by Latest Myanmar News
ထုံးလေးလေးပင်ပင်နဲ့ထုံးကြမ်းဖောက်နည်းလေးပါ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ထုံးကြမ်းအချိန်(၁၀)/ထုံး(၁)သေတ္တာ ၊ဆား(၃၅)ကျပ်သား ၊ထုံးဖောက်ရန် စဉ့်အိုး(ကော်ပုံး) ၊တောအ ရက်တစ်စိတ် ပြုလုပ်နည်း ထုံးကြမ်းတွေကို ရေပုံးထဲမှာအရည်ဘဝရောက်အောင်ဖျော်ပြီး စဉ့်အိုးမှာထည့်ပါ။ပြီးရင်ဆား(၃၅)ကျပ်သားကို ရေနွေးနဲ့ဖျော်ပြီးတောအရက်တစ်စိတ်ထည့်မွှေပါ။ ပြီးရင် စဉ့်အိုးအပြည့်ရေဖြည့်ပါ။ပြီးရင်သမအောင် စိတ်ကြိုက်မွှေပါ။ထုံးအပေါ်ရေကြည်ကိုမနက်ခင်းတိုင်းလဲလှယ်ပေးပါ။ရေပြည့်ဖြည့်ပါ။ တစ်နေ့ ၂ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးပါ။ အမြုပ်တွေ တက်လာပါလိမ့်မယ်။လုံးဝ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ။ ခပ်ထုတ်ပါ။အနည်းဆုံးတစ်လ(သို့) ၄၅ ရက် ကြာပါလိမ့်မယ်။ ရောင်းခါနီး ရေစစ် (သို့)ပိတ်စ နဲ့ သေချာလေး စစ်ပေးပြီး မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာနဲ့ စပ်ပြီး အသုံးပြုပေးပါ ဒါဆိုထုံးကြမ်းဖောက်နည်း အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ကွမ်းယာရောင်းရင် ထုံးကောင်းရုံနဲ့မရပါ၊ထုံးကွမ်းရွက်၊ကွမ်းသီး၊ဆေးမွှေး အစစပြည့်စုံမှ လူကြိုက်များတဲ့ကွမ်းရမှာပါ။ ထုံးပေါက်တယ်ဆိုရင်ထုံးလျော့သုတ်ပါ။ထုံးစပ်တယ်ဆိုရင်ထုံးသုတ်တာနည်းသွားလို့ပါ။ မိမိထုံးအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးလက်စမှန်အောင်သုတ်ပါ။ ကွမ်းယာမရောင်းခင် လက်ဆ မှန်အောင်ကွမ်းယာနည်း အရင် လေကျင့်ပါလို့ အကြံပြုရင်း အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ Yadi kyaw Zawgyi ထုံးေလးေလးပင္ပင္နဲ႔ထုံးၾကမ္းေဖာက္နည္းေလးပါ … Read more
ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ ကျပြီးဟုဆိုသော အိမ်ယာကွက် ၀ယ်မည်ဆိုလျှင်
ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ ကျပြီးပါပြီ။မီးတိုင်လည်းစိုက်ပြီးပါပြီ ။အရှုပ်အရှင်းတာဝန်ယူပါတယ်ဆိုပြီး အရှုပ်အရှင်းဖြစ်ခဲ့ရင်၂ဆပြန်လျော်ပါ့မယ်လို့စာချုပ်ထဲထည့်ချုပ်ထားပါတယ်။ဘာညာ မက်လုံးတွေပေါ့ဗျာ။ ကုမ္ပဏီ /ငွေရှင်ကြေးရှင်ကလယ်ကွက်တွေကိုဧကနဲ့ဝယ်ပေသတ်မှတ်ပြီးအကွက်ရိုက်ရောင်း။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံဟာကြွေပန်းကန်စေ့မဟုတ်လေတော့ခံရပြီဆိုရင်နစ်နာမယ်။ လျှပ်စစ်ဌာနအနေနဲ့ဓာတ်မီးတိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့အကွာအဝေးလည်းရှိမယ်ပေးနိုင်တဲ့လျှပ်စစ်ပမာဏကလည်းရှိရင်မူအရပေးမှာဘဲ။ လူနေခွင့်ရှိတဲ့မြေနေရာမှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားမှာမဟုတ်။ သူ့ဌာနနဲ့သူသူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့သူလေ။အမှုထဲသူ့ဆွဲထည့်လို့မရ။ဒါကိုသဘောပေါက်ထားရမယ်။ ပြီးတော့ယခင်မူ ကလယ်မြေကိုအိမ်ဆောက်လို့ရတယ်ပြောရောင်းရင် လိမ်ရောင်းတယ်ဆိုပြီးတရားစွဲလို့ရပေမယ့်ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေသစ်အရလယ်မြေကိုလက်ရှိပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်က အိမ်ဆောက်နေရင် လယ်ပိုင်ဖြစ်နေပြီးလယ်မလုပ်ဘဲအိမ်ဆောက်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိအမည်ပေါက်ပိုင်ရှင်ကိုလည်းအရေးယူရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဥပဒေသစ်ထုတ်ထားတော့ငါ့လက်ကလွတ်ပြွတ်။ ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းပါတခါတည်းစီစဉ်ပေးပါ့မယ်ဆိုပြီးတက်သုတ်ရိုက်ဂျင်းထည့်ပါလေရော။ ကိုယ့်အမည်ပြောင်းပါ စီစဉ်ပေးပြီးသားဆိုပြီးကျေးဇူးရှင်မထင်နဲ့။ နောက်လူရှင်း မူအရပိုင်ရှင်သစ်မဖြစ်ဖြစ်အာင်ထိုးထည့်တာဘဲ။ ပုံစံ-၁၀၅ ဆိုတာကမြေပုံဘဲမြေအသုံးပြုနေသူနေရာပြမြေပုံဥယျှာဉ်ခြံမြေကိုအစိုးရဆီကငှါးရမ်းအခွန်ဆောင်စိုက်ပျိုးစားသူ အတွက်လည်းပုံစံ-၁၀၅ ထုတ်လို့ရတာဘဲ။ဘိုးဘွားပိုင်မြေသမားလည်းပုံစံ-၁၀၅ထုတ်လို့ရတာဘဲ။ ဂရံမြေသမားလည်းပုံစံ-၁၀၅ထုတ်လို့ရတာဘဲ။တပ်သိမ်းမြေလည်းပုံစံ-၁၀၅ထုတ်လို့ရတာဘဲ။ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်locationပေါ့ဗျာ။ပုံစံ-၇ ကတော့သီးခြားရှင်းမနေတော့ပါဘူး။ လယ်ယာမြေ(ဥယျာဉ်ခြံမြေအပါအဝင်)ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပုံစံတစ်ခုဆိုပါတော့။ လယ်မြေအတွက်လည်းပုံစံ-၇ဥယြာဉျခွံမွအေတှကျလညျးပုံစံ-၇ပါဘဲလူနဘေို့မဟုတျ။စိုကျပြိုးမွအေတှကျပါ။ တချို့များကျဥယျာဉ်ခြံမြေကိုတန်ဘိုးနည်းဘိလပ်မြေအုတ်တွေနဲ့ခြံဝင်းခတ်အကွက်ရိုက်ပြီးအိမ်ဆောက်နေလို့ရသယောင်ဂွင်ကရိုက်သေးသဗျ။ ရွာနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေဆိုရင်တော့အခြားနည်းသုံးခွင့်လျှောက်။ တိုးချဲ့ရွာမြေအဖြစ်ပြောင်းပြီးမှအိမ်ဆောက်နေခွင့်ရသဗျ။လယ်မြေပုံစံများကိုဗဟုသုတအဖြစ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ( လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံများ ) ပုံစံ(၁) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာ။ ပုံစံ(၂) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းကို ကန့်ကွက်လိုသူတို့က ကန့်ကွက်နိုင်ရန် ထုတ်ဆင့်သည့် ကြော်ငြာစာ။ ပုံစံ (၂-က) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် … Read more
ကားမှန် အတင်အချ လုပ်မရတော့တဲ့အခါ
July 10, 2021 by Latest Myanmar News
ကား ဘက်ထရီ ခေါင်း ဖြုတ်မိသောအခါ သေချာ ပေါက် ကြုံကျရသော ပါဝါဝင်းဒိုး ပြသာနာ ကား ဘက်ထရီ ခေါင်းဖြုတ်မိသောအခါ၊ ယာဉ်မောင်းသူ တံခါးပေါက်ရှိ ပါဝါဝင်းဒိုး မိန်း ခလုတ်မှ ယာဉ်မောင်းဘက် တံခါးမှန်မှလွဲ၍ ကျန်တံခါးပေါက် ၃ခုမှ မှန်များအား ယာဉ်မောင်းသူမှ အတင်အချ ပြုလုပ်၍ မရတော့ပေ။ ကျန် တံခါးပေါက် ၁ခုချင်းဆီမှသာ အတင်အချ ပြုလုပ်နိုင်တော့ခြင်း မျိုးဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဒီအချိန်မှာ မှန် အတင်အချ ခလုတ်မှာ ပါသော မီးအစိမ်းလေးမှာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သာ လင်းနေပါလိမ့်မယ် … ခုလိုဖြစ်နေရင် ဝါယာရိန်းဆိုင် သို့ ပြေးစရာ မလိုဘဲ ကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် .. ကျနော်တို့အခေါ် အဝေါ်ဆက်တင်ပြန်ချိန်ရ မယ် တို့ .. … Read more
July 8, 2021 by Latest Myanmar News
အိမ်တွင်းက အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကို ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ နှိမ်နှင်း နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတွေကို ရေရှည်အသုံးပြုမယ် ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကို သဘာဝပစ္စည်းတွေ အသုံးပြုပြီး နှိမ်နင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁) ပုရွက်ဆိတ် ။ မီးဖိုချောင်၊ ထမင်းစားပွဲနဲ့ အိမ်ရဲ့နေရာအနှံ့မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ပုရွက်ဆိတ်တွေကိုတော့ သူတို့ လာတတ်တဲ့ နေရာတဝိုက်မှာ သခွားသီး စိတ်လေးတွေ ထားပေးခြင်းအားဖြင့် ဝေးဝေးပြေးစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် နည်းလမ်းကောင်းတခုကတော့ သစ်ကြံပိုးခေါက်မှုန့် အနည်းငယ်ကို ပုရွက်ဆိတ်တွေရှိတဲ့ နေရာတဝိုက်မှာ ဖြူးပေးထားခြင်း အားဖြင့်လည်း နှိမ်နင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ပိုးဟပ် ။ ပိုးဟပ်တွေက အန္တရာယ်များတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကို သယ်ယူလာနိုင်တဲ့ အင်းဆက်တမျိုး … Read more
အင်ဂျင်ကိုင်ဖို့လိုနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြသသော အချက်လေးများ
July 7, 2021 by Latest Myanmar News
အင်ဂျင်ကျနေပြီလားဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက် (၅) ချက် အင်ဂျင်ကျတာ၊ အင်ဂျင်ကိုင်တာ၊ အင်ဂျင်တင်တာ၊ အင်ဂျင်အပေါ်ဖွင့်/အောက်ဖွင့်လုပ်တာ” ဆိုတာမျိုးတွေကို လူတိုင်းကြားဖူးကြမှာပါ။ အဲဒါတွေဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ? ဘယ်လို အခြေအနေတွေမှာ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်သလဲ? အင်ဂျင်ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို လုပ္တာလဲ? ဆိုတာကို ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြပေးပါမယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာသာ အင်ဂျင်ကျတာ၊ အင်ဂျင်ချတာ အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြပေမယ့် အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Engine Overhaul လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ကိုင်တာ အင်ဂျင်ချတာဟာ ငွေကုန်ကြေးကျများပြီး စက်သမားတိုင်း ကြုံတွေ့နိုင်တာမို့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ Engine Overhaul (အင်ဂျင်ကိုင်) လုပ်ဖို့လိုအပ်သလဲ? ၁။ အင်ဂျင်ဝိုင်စားများလာတာ အင်ဂျင်ကိုင်ရတော့မယ့် အင်ဂျင်တိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက အင်ဂျင်ဝိုင်စားများလာတာပါပဲ။ အင်ဂျင်ဝိုင်လဲထားမယ်၊ အင်ဂျင်ဝိုင်သက်တမ်းပုံမှန်ကာလ မပြည့်သေးခင် အင်ဂျင်ဝိုင်ခန်းသွားမယ်၊ အင်ဂျင်ဝိုင်လျော့သွားမယ်ဆိုရင် အဲဒါ သင့်အင်ဂျင်ကျလာတဲ့ … Read more
တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေ ၀ယ်တဲ့အခါ ဘာတွေ သတိပြုဖို့လိုအပ်သလဲ
July 5, 2021 by Latest Myanmar News
ဂျပန်က တင်သွင်းတဲ့ တစ်ပတ်ရစ် (used) ကားဝယ်သူတွေအနေနဲ့ ဂရုပြုသင့်တဲ့အချက်လေးများ (၁) ငွေဘယ်လောက်သုံးမှာလဲ ကားဝယ်ဖို့ မိမိတတ်နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ညီမျှတဲ့ကားအမျိုးအစား ကို စတင်ရှာဖွေပါမယ်။အဲသည်အတွက် ကားအရောင်းစင်တာတွေ၊ကားရောင်းဝယ်ရေး စခန်းတွေ၊ ကား ပွဲစားတန်း တွေမှာ မိမိ သုံးမယ့်တန်ဖိုးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ကား အမျိုးအစားတွေ ရှာဖွေရပါမယ်။ အွန်လိုင်းဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တင်ထားတဲ့ကား တွေထဲကလည်း ကြည့်နိုင် ပါတယ်။ ကားဂျာနယ်တွေ၊ စီးပွားရေးသတင်း ဂျာနယ်တွေက နေလည်း ကားဈေးနှုန်းတွေ သိရှိစေနိုင်ပါတယ်။ (၂) သင့်တင့်မှန်ကန်တဲ့ကားကို ရှာပါ ဘယ်မော်ဒယ်၊ ဘယ်ကား အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်မလဲ ဆိုတာဟာ ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ဘယ်လို ကိုယ်ထည်ပုံစံက ကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနဲ့ ကိုက်ညီမလဲ ဆိုတာ ရွေးချယ်ရပါမယ်။မော်ဒယ်အလိုက် ကွဲပြားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေ လေ့လာပြီး သင့်တင့်မှန်ကန်တဲ့ကား အမျိုးအစား ကို ရွေးချယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၃) … Read more
July 4, 2021 by Latest Myanmar News
ဒါကိုသိရင် ကြက်ဥခွံလေးတွေကို လွှင့်ပစ်မိမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလေ ကြက်ဥခွံတွေကို ပြန်ပြီး အသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်း(12)မျိုး ကြက်ဥဆိုတာ အာဟာရဓါတ်တွေ ပြည့်ဝနေတဲ့ အစားအစာတစ်ခု ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ကြက်ဥစားပြီးရင် ကြက်ဥအခွံတွေကို လွှင့်ပြစ်လိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီးရင်တော့ ကြက်ဥခွံတွေ လွှင့်ပစ်ခဲ့တာ ငါတော်တော်မိုက်မဲပါလား ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေးမိမှာ အမှန်ပါဘဲနော်။ဒါကြောင့်မို့ အသုံးဝင်တဲ့ကြက်ဥအခွံတွေကို ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ (၁) ခရမ်းချဉ်ပင်တွေကို သန်စွမ်းစေတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ခရမ်းချဉ်ပင်တွေကို ကြက်ဥခွံတွေက အကျိုးပြုပါတယ်။ကြက်ဥခွံတွေကို ခြေမွပြီးတော့ခရမ်းချဉ်ပင်ရဲ့ အမြစ်အနီးတွင်းတူးပြီး ထည့်လိုက်ရပါမယ်။ကြက်ဥခွံဟာ ကယ်ဆီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ခရမ်းချဉ်သီးပင်တွေ လိုအပ်တဲ့ ကယ်ဆီယမ်ဓါတ်ကို ပေါပေါများများရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂) သန့်ရှင်းရေးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြက်ဥခွံကို အော်ဂဲနစ် သန့်ရှင်းရေးသမားလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ကြက်ဥခွံဟာ မီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကြေးညှော်တွေ၊ မှိုင်း တွေ၊ အိုးမဲတွေနဲ့ ဆီအညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြုလုပ်နည်းကတော့ ကြက်ဥခွံကို အခြောက်လှန်းပြီး … Read more
ကိုယ့်ကားက ဘယ်လို နံပါတ်ပြားမျိုးရမှာလဲ စစ်ကြည့်လိုက်နော်
July 2, 2021 by Latest Myanmar News
ကညနက အသစ်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးတဲ့ကားနံပါတ်ပြားတွေမှာ ပါလာမည့်အသေးစိတ်မြို့နယ်အလိုက် Code နံပါတ်လေးတွေထွက်ပါပြီ ကိုယ့်ကားပလိတ်မှာ ရမယ့်မြို့နယ်အလိုက် Code လေးတွေကို ပုံထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ ဥပမာ …. ရန်ကုန်တိုင်း တိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာနေရင် YGN-1 ရန်ကုန်တိုင်း ထန်းတပင်မြို့နယ်မှာနေရင် YGN-2 ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ နေရင် YGN-8 ရန်ကုန်တိုင်း ဒေါပုံ မြို့နယ်မှာနေရင် YGN-16 မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ဆည်မှာနေရင် MDY-1 မန္တလေးတိုင်း ချမ်းမြသာစည်မှာနေရင် MDY-12 မန္တလေးတိုင်း အောင်မြေသာဇံမှာနေရင် MDY-16 မန္တလေးတိုင်း အမရပူရမှာနေရင် MDY-18 Ko Kyi Thar Han Zawgyi ကညနက အသစ္ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေပးတဲ့ကားနံပါတ္ျပားေတြမွာ ပါလာမည့္အေသးစိတ္ၿမိဳ့နယ္အလိုက္ Code နံပါတ္ေလးေတြထြက္ပါၿပီ ကိုယ့္ကားပလိတ္မွာ ရမယ့္ၿမိဳ့နယ္အလိုက္ Code ေလးေတြကို ပုံထဲမွာဝင္ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္။ ဥပမာ …. … Read more
မိုးရေထဲ ကားမောင်းရတဲ့အခါ သတိပြုရမည့် အချက်လေးများ
” မိုးရာသီတွင် ယာဉ်မောင်းသူများ သတိပြုရန် အချက်လေးများ ” ယခုအချိန် ဟာဆိုရင် မိုးရာသီရောက်လာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ယာဉ်မောင်းသူများ သွားရလာရတာ ခက်ခဲလာတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ညအချိန်ခရီးဝေးသွားရလို့ လမ်းမှာ မိုးရွာရင် ပိုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးရာသီမှာ မောင်းနှင်သွားလာကြမယ့် ယာဉ်မောင်းသူတွေ အတွက် သတိပြုဖွယ်အချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ (၁) လက်နှစ်ဖက် ဖြင့် စီယာရင်ကို ကိုင်ပါ။ ရာသီဥတုသာယာနေတဲ့ အချိန်မှာဆို စတိုင်ကျကျ စတီယာရင်ကို လက်လေး တစ်ဖက်တည်းနဲ့ မောင်းနိုင်ပေမယ့် မိုးတွင်းမှာ ဆိုရင်တော့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သေချာကိုင်ပြီး မောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ (၂) စိတ်ပျံလွင့်စေမယ့်အရာတွေ ခဏ ဖယ်ထားပါ။ မိုးတွင်းမှာ ကားမောင်းတဲ့အခါ ဖုန်းသုံးတာဟာ တကယ်ကို အန္တရာယ်များပါတယ်။ သာမာန်ရာသီဥတုမှာတောင် ကားမောင်းရင်း ဖုန်းသုံးတာကြောင့် မလိုလားအပ်တာတွေ … Read more